Keyd maxalli ah oo wata xirmooyinka AUR (Arch Linux) | Laga soo bilaabo Linux
Keyd maxalli ah oo wata baakadaha AUR (Arch Linux)
x11tete11x | | Lagu taliyay, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Macnaha guud ee qoraalka lagu sameeyay
Kuwo badan ayaa ogaan doona in sida caadiga ah aan isticmaalo distros-ku saleysan distros, su'aal ah inta aan fasax ku jiro cusbooneysiinta ugu dambeysa ee gacaliyahayga funtoo, waxay ka dhigtay nidaamka burburka (waxaa laga yaabaa inaan hagaajiyo laakiin ma aanan dareemeyn inaan la dagaallamayo), sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan siiyo fursad cusub Arch Linux, Waxaan u adeegsaday waqti dheer kahor.
Oo maxay ahayd dhibaatadayda iyada? Asal ahaan waxa aan isticmaalo AAD U BADAN software AUR (loogu talagalay akhristayaasha markii ugu horeysay AUR, waxay la mid tahay "repo" taas oo dadka isticmaala ay soo geliyaan barnaamijyo aan ku jirin kaydinta rasmiga ah, wax la mid ah PPA-da Ubuntu).
Waa maxay dhibaatada tan? Taasi marar badan software-ka AUR ma shaqeynayo, ama sababta oo ah dayactirayaashu waxay dayaceen xirmooyinkooda ama sababtoo ah ma haystaan ​​aqoon ay ku xalliyaan dhibaatada ka dhalatay nooca cusub, tan, asal ahaan iyo ka fiirsashada ah inaan si aad ah ugu xanaaqsanahay, way i dhibaysaa, tan iyo markii aan noqday waxaan la dagaallamayaa iskudhafid iyo pkgbuilds jabiya ayaan u socdaa Gentoo/funtoo.
Waa tan tirakoobka bogga oficial anoo deeqsi ah isla markaana u maleynaya in xirmooyinka aan waligood la cusbooneysiinin iyo xirmooyinka agoonta ay isku mid yihiin, waxaan haysanaa ku dhowaad 1/4 AUR ma shaqeyneyso, sidaa darteed xanaaqayga. Maxaa ka duwanaa markan?
1 Bilowga boostada
4 Ku dar baakado
5 Cusboonaysii keydka deegaanka
6 Yapa: "Xawaaree habka isku duwidda xirmada"
Waan helay barnaamijka maxaliga ah, yaabkan aad aragto in qof khalkhal geliyey AUR Sidayda oo kale, wuxuu go'aansaday inuu abuuro, si ugu yaraan loo siiyo isticmaalaha xakamaynta "dhibaatooyinkan", asal ahaan waxa codsigani noo ogolaadaa waa inaan samayno bakhaar maxalli ah, oo aan ku ridi karno xirmooyinka aan ku soo uruurineyno AUR, sidan, waxaan ku daryeeli karnaa abaabulka iyo dayactirka xirmooyinka AUR.
Waxaan kala soo bixi karnaa oo ku soo ururin karnaa makepkg:
Ama waxaan ku rakibi karnaa adigoo Yori:
Kadibna sida halkaa lagu muujiyey, waa inaan ku-hagaajinno-repo maxalliga ah faylka «~ / .config / maxalliga-repo»Markii hore way madhan tahay, waxa aan sii wadi doonno inaan sameyno ayaa ah inaan abuurno galka aan ku martigelin doonno dib-u-helkeenna, xaaladdayda ayaan ku dhejiyey /guriga/x11tete11x/.repo/x11tete11x
hadda waxaan qaabeynaa "~ / .config / local-repo":
Ogsoonow inay hayaan tusaalooyin sida loo qaabeeyo-repo-ka halkan: /usr/share/local-repo/config.example
Sikastaba, maaddaama waxa aan rabo inaan u isticmaalo dib-u-dhiska maxalliga ahi uu yahay mid aasaasi ah, tani waa qaabeynteyda:
Sidaad arki doontid, waxaan cadeynayaa meesha aan doonayo inaad wax walba ka hesho, halkan waxaad ku haysaa sharaxaad ku saabsan wax kasta oo ay qabato, oo laga soo qaatay boostada aan ku saleynayo inaan sidan ku sameeyo:
wadada -> Waxay tilmaamaysaa meesha ay ku jiraan baakadaha keydka.
calaamad -> Saxeex xirmooyinka furaha PGP.
calaamadb -> Ku saxeex diiwaanka xogta fure PGP.
gasho -> Diiwaan geli goobta meesha log-repo-ka deegaanka lagu keydin doono.
dhisme -> Fayl ay ku keydin karto diiwaanada markii ay dhisayaan xirmooyinka.
pkgbuild -> Faylka halka lagu keydinayo feylasha PKGBUILD.
Ku dar baakado
Haddii xirmada in lagu daro ay ku jirto faylkeena sida xirmo dabacsan (tusaale ahaan, waxaan soo dejineynaa midna waxaan ku leenahay galka soo dagsashada, ama waxaan isku soo aruurineynaa xirmo nafteena gal galka gurigeenna loogu tala galay in la isku daro), waxaan ku darnaa:
iyo hadday tahay xirmo ka mid ah AUR waxaan isticmaalnaa:
Caddayn: Haddii xirmada aad rabto inaad rakibto ay ku tiirsan tahay kale AUR, "si otomaatig ah uma xaliyo" ku tiirsanaantaas
Taasi waa, tusaale ahaan, haddii aan rabno inaan rakibno xirmada appmenu-gtk2 taasi waxay kuxirantahay libdbusmenu-gtk2 waxa ku jira AUR, Ma yeeli karno
maxalliga-repo x11tete11x -A appmenu-gtk2
Maaddaama ay dhihi doonto ma heli karto xirmada libdbusmenu-gtk2, waa inaan sameynaa:
local-repo nombrerepo -A libdbusmenu-gtk2 ka dibna local-repo nombrerepo -A appmenu-gtk2
habkan markaad raadineyso libdbusmenu-gtk2 ku tiirsanaanta mar horeba waxaa laga heli karaa keydka.
Si aad ugu darto xirmo waxaad si toos ah ugu nuqulan kartaa galka kaydinta (kiiskeyga ~ / .repo / x11tete11x / pkgs-x86_64) ka dibna aad gacanta ku cusbooneysiin kartaa keydka, laakiin tani waa wax aad u dhib badan
Ka saar baakadaha
Si aad uga saarto xirmooyinka waxaan haynaa tilmaanta:
Ku dar kaydinta deegaanka liiska keydadka
Waa inaan ku darnaa bakhaarka la abuuray liiska keydadka aan hadda isticmaalno, tan awgeed waa inaan wax ka bedelno faylka /etc/pacman.conf oo aan dhignaa khadadka aan hoos dhigay, bilowga meesha ay keydku ka bilaabanayaan, si markaa dib-u-helkeennu wuxuu ka mudnaanayaa inta ka hartay, waxaa sidoo kale lagu dari karaa dhamaadka sida repo lagu daray:
oo waxaan dhigay:
Ugu dambayntii waxaannu waafajineynaa kaydinta macluumaadka Pacman waxaanan leenahay keydkeenii diyaar.
Nota: Markii uhoreysay ee aan rabo inaan iswaafajiyo, qalad bay i siisay waxayna ii sheegtay inaysan helin faylka: "/home/x11tete11x/.repo/x11tete11x/pkgs-x86_64/x11tete11x.db", ku xali adiga oo sameeya : MARKDOWN_HASH1a42f7dd94ef93f234b52c01c73dc5f0MARKDOWN_HASH taasi waa, waxay abuurtay fayl madhan oo sidaas loogu magac daray, ka dibna markaan iswaafajiyay uun baan sifiican u cusboonaysiiyay waxayna si sax ah u shaqaysay
Cusboonaysii keydka deegaanka
Mar alla markii aan shaqeyno keydkeenna waa inaan ka taxaddarno inaan cusbooneysiinno, tan waxaan u heynaa:
Doorashada -U cusbooneysii xirmooyinka laga helay AUR iyo ikhtiyaarka -V ka cusbooneysii xirmooyinka CVS-ka AUR (sida git, svn ama cvs tusaale ahaan).
Ugu dambayntiina shaashadaha qaarkood ee repo 😀:
Yapa: "Xawaaree habka isku duwidda xirmada"
Maaddaama aan soo uruurineyno xirmooyin, waxaan dooneynaa inaan xawaareyno waxoogaa yar annaga oo taabaneyna mid ka mid ah xulashooyinka naafada ah ee naafada ah, asal ahaan waxa aan sameyneyno waa inaan u sheegno makepkg inay adeegsato dhammaan iniinnada si aan u soo uruurino tan waxaan raadineynaa khadka: «MAKEFLAGS »Gudaha /etc/makepkg.conf oo waxaan dhigey« = -j »Taasi waa, kiiskeyga waxaan haystaa a 7-xuddun Core I4 in HT ay ku dareyso 4 dheeri dheeri ah oo macquul ah, ka dibna MAKEFLAGS waxay u egtahay sidan:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Keyd maxalli ah oo wata baakadaha AUR (Arch Linux)
Weyn, tan wey igu weyn tahay aniga 😀
Oo waxaan u maleeyay inaadan waligaa ka tagi doonin Gentoo / Funtoo, badanaa sababtaas awgeed way i dhibaysaa, USEs.
Waxaan kuu sheegayaa, openSUSE hehehe.
Laakiin mar waxaan ahaa qaansoley waxaana jira maahmaah. "Marka Arch la rakibo, marwalba way soo noqotaa."
aggggghhhh maya fadlan Suse waan necbahay! G +-kayga waxaan ku sharaxay sababaha, waxa ugu xun oo dhan waa wixii aan ka idhi Yast ee nooca gtk ee Yast si fiican ayaa loo qabtay ¬¬ taas oo i siisay xitaa in ka sii hooseysa, iyo Firewall-ka Suse wuu necbaa, waxaan go'aansaday inaan bedelo Lubuntu oo ka timid tii hore ee uu ii furay 'Openuse + LXDE, maanan la macaamili kareynin gidaarka si aan u rakibo daabacaha shabakada, Lubuntu waxay u aqoonsatay inay tahay wax aan jirin, iyo sida cadaabta? Sidee ayey u noqon kartaa in mediatomb uu leeyahay ku-tiirsanaan aan buuxin oo ku jirta bakhaarka "rasmiga ah" Sababahaas awgood iyo labada codsi ee la doonayo in isla wax la sameeyo Suse maya mahadsanid xD
Hahahahaha Waa inaad rakibtaa openSUSE + KDE.
Hagaag, waxaa jira dhadhan kasta. Laakiin u furan SHARCIYADA.
Aniga taasi waa run. Ii fiiri hahaha
Miyaad sidoo kale neceb tahay OpenSUSE elav mise adiguba waxaad ahayd Archero? hehe.
Weligay ma jeclayn furitaanka 'SUSE'. Dhammaan qeybinnada aan isku dayay, had iyo jeer waxay ahaayeen kuwa ugu culus.
Tssss, waxaan kugula talinayaa inaad markale fiiriso, waa wax aad u wanaagsan 😀
Runtii waxaan ku tijaabiyay KDE 4.10 waana run in ay soo hagaagtay, laakiin ma ogi, had iyo jeer waxaa jira wax aanan jeclayn. Sidoo kale, inta udhaxeysa Debian iyo Arch Linux waan ku faraxsanahay.
Hahaha, wax la mid ah ayaa ku dhaca Debian.
Ku rakib 6, aad u da 'weyn.
Ku rakib sanadkaan cusbooneysiinta beta 7 si loo sii daayo, haddii aan jeclaa waxyaabo kala duwan, sida xirmooyinka aad u deggan, laakiin weli waxaan u arkaa inay duug tahay, xirmo la'aan, ma arko wax dheecaan badan leh, iwm.
Waxaan ku dheganahay OpenSUSE Tumbleweed KDE iyo Slackware KDE. Waxaan doonayay inaan ku laabto Arch muddo dheer.
Dhanka kale waxaan ku faraxsanahay Windows-kayga 8-aad. Madaxa kama xujeeyo macno daro waana wax soo saar badan.
aniga ahaan waa ii fududahay inaan kala soo baxo barnaamijka bogga rasmiga ah ama daaqadaha daaqadaha adigoo gujinaya guji fudud waana taas.
Waqti iskama lumiyo dejinta waxyaabo qariib ah, waqtiga oo dhan ee iga harayna waxaan uga faa'iideystaa inaan ku raaxeysto oo aan reerkayga la baxo, intaad idinkuna kursigaas ku fadhidaan barxadaada oo aad dhex gasho nidaamkaaga aan cidna dan ka lahayn.
Tifatiraha boostada ku hagaajiye: Sida muuqata Windows-ka patricio72-ku ma laha hubi higaada.
Sidoo kale. Farxad yeelo, la raaxayso reerkaaga in inta badhidaydu laba jibbaaran tahay, maskaxdayduna sii socoto laanteeda sidaa darteedna, waxaan helayaa aqoon dheeri ah. 😉
Waxaan la baashaalayay asxaabteyda, qoyskeyga iyo saaxiibteyda 3 todobaad, mid kamid ah maalmaha, waxaan lumiyay sameynta Epson XP-201 daaqadaha, Windows XP wuxuu ahaa gaarsiin, mid kamid ah 2 daaqad 7 ee aniga igujira guriga, kan waxaan qaatay dhib la'aan midka kale wuxuu siiyay dagaal ... dhamaan Lubuntus-ka guriga jooga waxay ku qaateen dhib la'aan, aabahay sidoo kale wuxuu ku rakibaa barnaamijyo isagoo riixaya Dukaanka Ubuntu ...
Dhanka kale, maxaad ku qabanaysaa nidaamka aan cidna dan ka lahayn? Waxaan ku xasuusinayaa inaad wax ka qoraysid android, halkaas ka aqri waxa ay ku saleysan tahay android iyo farqiga saxda ah ee u dhexeeya Linux iyo kernel-ka android, hadaad fahanto waxa ay ka hadlayaan, waxaad ogaan doontaa in doodaada murugsan ee aad ka hor imaaneyso. naftaada naftaada, dhanka kale maxaad ku qabataa internetka? Waxaan ula jeedaa, waxaa lagu rakibay Linux server ... hadana wax kale oo doqon ah, maxaad ka faallooneysaa halkan? Waxaan ku idhi miyaanad la joogin qoyskaaga? ... Midda kale, walaalkay wuxuu leeyahay daaqadaha 7 si uu ugu ciyaaro guriga, waxaan rakibay qalab aan ku kormeero cajaladaha, waa inaan raadsadaa bog kale maxaa yeelay daaqadaha daaqadaha way fiicnaayeen, mahadsanid, waxaa igu dhacay malware, markaa labadaba waan haystay chrome iyo Firefox oo ay ku dhacday xayaysiisyo yaab leh ... Waxaan ku qasbanaaday inaan sameeyo "waxyaabo yaab leh" si aan u helo waxaas oo dhan ... antivirus-ka (HA! Horey ayaan u ilaaway taas) AVG oo si buuxda loo cusbooneysiiyay ayaa tiri: "mahadsanid wanaagsan" ma dhicin ... sidoo kale waa dhibkeyga inaan isticmaalo nidaamka aan dareemayo sidaan u arko, ee maahan kaaga. Haddayse igu maaweeliso inaan qaabeeyo nidaamkeyga oo aan sida ugu badan uga faa'iideysto, WAA MAXAY? KHALADAN?, Aaaaa run daaqadaha waxba kama badali kartid…. aaaaa run nooca bilowga ah ee Windows ma keenayo taageero wax nacasnimo ah sida borotokoolka IPP sidaa darteed kuma xiriirin karo server-ka CUPS ee Linux hoostaga ... aaaa run waxay ku qaadatay muddo 6 sano ah inay ku hirgeliyaan nidaamka sirta ee lambarka sirta isticmaalaha. ... Waxaan ku xasuusinayaa in daaqadaha 95 ilaa XP ay ku filneyd inaad aado galka system32 oo aad nuqul ka sameyso feylka User.pwl (Waxaan u maleynayaa inay ahayd kordhinta) waana taas guriga, aamusnaan, xoog caayaan ama miisaska qaansoroobaad, adiga wuu jabin karaa erayga sirta ah ee qofka isticmaala si uu u sameeyo waxkastoo aad rabto hadhow aaaa run, daaqadaha XP hadaad ku qorto: "Bush wuxuu qarinayaa echos" ama "Bush wuxuu qariyey facs" txt ka dibna waad fureysaa, wuu faafreebi doonaa…. daaqadaha runta ah ... had iyo jeer aad u qabow ...
Iskaga dhaaf. Waxaan sidoo kale waqti badan u haystaa qoyskeyga, saaxiibteyda, waxyaabaheyga waxaanan u isticmaalaa GNU / Linux si farxad leh.
Farxad ayaad ku nooshahay sanduuqaaga qashinka, ha u tuurin dadka kale ciid.
Troll iyo xD aad u cad
Oo miyaad rumaysan doontaa iyo wax walba? Xaggee bay hadda dhigeen daaqadda 8, furaha f8?
faallooyinka caadiga ah ee Linux wuxuu isku difaacayaa isla sheeko hore "intarnetka intiisa badan wuxuu ku shaqeeyaa Linux, in android uu yahay Linux iyo blah blah blah"
Waan ogahay in android adeegsato kernel-ka Linux, laakiin maahan gnu / Linux. waana fududahay in la isticmaalo maxaa yeelay waxay leedahay interface garaafis ah oo si fudud loo isticmaali karo oo ay abuurtay shirkad loona sameeyay macaamiisheeda.
sheekada jirtana ah in internetka oo dhan uu ku shaqeeyo Linux waa run, laakiin iyagu waa kaliya shaqooyinka ka shaqeynta asalka ee ay qabtaan webservers, tusaale ahaan Apache, PHP, MySQL, marka la soo koobo waa uun adeegyada webka.
Laakiin aan u nimaadno ujeedka, aan ka hadalno DESKTOP, aan runta ka hadalno, Linux wali waxay haysaa waddo dheer oo in la maro, waxaa ka maqan darawallo hagaagsan oo qalabkayaga ah, waxaa ka maqan barnaamijyo xirfadeed oo wanaagsan sida Adobe suite, Office, Autocad oo ha imaan aniga ahaan inay jiraan waxyaabo kale oo bilaash ah oo bilaash ah maxaa yeelay way aad u liitaan. ugu dambayntiina, isticmaaluhu wuxuu u baahan yahay EASE, iyo sidoo kale daaqadaha, oo iyaguna leh konsole laakiin ku dhowaad cidna ma isticmaasho ama uma baahna, illaa aad ka mid tahay sysadmin ama barnaamij-yaqaan mooye. Wax walba waxaa lagu sameeyaa heerka garaafka, oo ka duwan Linux oo waqti ka waqti aad u baahan tahay inaad u weecato qunsuliyadda si aad amar uga sameyso ama aad u saxdo feyl isku dhafan, runtuna waa, taas oo dhadham aad u xun ku reebaysa afka dadka isticmaala guud waxay rabaan inay wax walba u shaqeeyaan isaga.
faallan waxay aadeysaa @ x11tete11x jawaab ahaan
Haa nin, waa la ogyahay in loogu talagalay x11tete11x. Laakiin dhab ahaan, waa wax aan faa'iido lahayn inaad ku dhacdo dood sida nadiif ah sida tan hadda bilaabeysa inay sameyso.
Waan aqriyaa faallooyinka noocan ah waana iga cuncun. Qeex "sahlanaanta isticmaalka" maxaa yeelay KDE waxaan si sahal ah ugu sameeyaa sida Windows 7 oo kale, oo xitaa waxyaabo badan xitaa waan fududeeyaa. Laakiin ma doonayo inaan dhex galo dooda caadiga ah. Miyaad isticmaashaa Windows? Adiga kuu wanaagsan. Aynu ku isticmaalno GNU / Linux nabadgelyada. Aynu dhaafno shaqada. Aynu iska ilaalino viruska. Aynu wax badan ka barano maalin kasta. Fadlan, ha u imaanin inaad olol ku abuurto dadka aan kula soo carqaladeyn, ama Windows-kaaga.
Had iyo jeer waxaan haystay fara badan in Aero uu yahay KDE la dhejiyay xD
jawaabta caadiga ah ee ka socota "windowsero" tani waxay noqon doontaa faaladaydii ugu dambeysay ee ku saabsan muunadan, ma iska indhatirtay dhamaan cilladaha daaqadaha aan kugu magacaabay, sethc.exe, ma kula midbaa adiga?…. Ii sheeg, sideen ku sameeyaa wax doqonimo ah sida sameynta shabakad shabakad gaar ah Odaygeyga iskuulka uu wax ku barayo waxay isticmaalaan proxie markasta oo uu daaqadaha ku xirnaana waa inuu gacanta ku habeeyaa cinwaanka IP-ga, Linux shabakad kastaa waxay leedahay astaanteeda…. Waxyaabaha ayaa maqan, ama waan ku diidi doonaa, laakiin taasi wax kuu tari mayso, run ahaantii? Waxay ila tahay inaan u kireysanayo gacmahaaga sixirka ah si aan u rakibo daaqadaha maxaa yeelay gurigeyga daaqadaha qaar marwalba way ku xumaadaan sabab la yaab leh ...
"Isticmaalayaasha caadiga ah ee raba in wax walba ay shaqeeyaan" hadda, duulimaad ku aado magaaladeyda una sharax taas aabbahay oo leh kubbado ay ka buuxaan daaqado si uu naftiisa u caayo (waa nin 50 jir ah, macallinka fiisigiska ee dugsiga sare) sharrax sababta hadda waa inuu adeegsadaa "metro", waxaan dhigay Lubuntu iyo ninka farxadda leh, muuqaalkii hore ee Windows XP ee noloshiisa oo dhan, hababka loo maro xarunta softiweerka, fayrasyo ​​malaha, ninkiina wuu faraxsan yahay, waxaan ku adkaystay inuu gurigayga yimid oo sharax sababta aad hadda u isticmaalayso METRO ...
Sure, iyo imisa khadadka amarka iyo feylasha qaabeynta ee aad sameysay si ay kuugu shaqeyso?
waa daaqadaha waa u fududahay sida loo isticmaalo saaxiriinta ama caawiyeyaasha mana ahan inaan koobiyeeyo oo aan dhajiyo amarrada aad ka hesho goobaha.
isku day fiican laakiin hada daaqadaha ayaa boqor ah
Haddii aad tixraacdo xiriiro dhowr ah oo shabakad ah, sida ugu fudud ee garaaf ahaan u furo tifaftiraha isku xirka oo ku dar inta ugu badan ee aad rabto
Weligaa ma rakibtay qaybinta GNU / Linux? Haddii aadan rakibin, ha la hadlin adigoon ogeyn
PS: GNU / Linux qaybinta waxaa sameeya bulshooyinka isticmaala, maahan shirkadaha waaweyn sida Microsoft
Ku jawaab eltigreasesino
Waxaan ka hadli doonaa waxyaabo nacasnimo ah, ka doodi maayo inay ka fudud tahay ama ka dhib badan tahay, waxaan si fudud uga fakarayaa inaad si qumman u tahay… runtiina, in caqli-la'aantu aysan shaqo ku lahayn isticmaalka daaqadaha, waxaa jira dad sameeya wax shaqo ahna kuma laha adiga.
Haddii ay aniga igu xirnaan lahayd, faallooyinkaagu ma dhaafi doonaan, waxaad tahay tiknoolajiyad runti ah, run ahaantii doodahaaga aan loo adeegsan GNU / Linux waa nacasnimo, ma dhahayo waa inaad isticmaashaa, si fudud, cidna dan kama lihid sababta aadan u adeegsan.
Taladayda ugu fiican? Iska ilaali inaad noqoto mid qosol leh oo ha u maleynin inaad dareemeyso sida nin weyn oo doodaha diidaya, kaliya ku koobnow inaad faallo ka bixiso laakiin ma dhihi doontid wax wax dhisaya ...
Wixii Elav: ha u oggolaan inuu sii mariyo faallooyin kale ama wuu sii wadi doonaa wadahadalka, aniga dhankeyga, kan halkan jooga hadda kama hadlayo, si kasta oo ay u dhawaaqdo awood, mararka qaarkood waa inay noqotaa sida oo kale.
cufan. Patrick72 wuxuu noqon karaa waxaad sheegatay oo dhan, laakiin ma wanaagsana in laga xumaado. Waxaan horeyba ugu helnay sumcad shabakada in dadka isticmaala DesdeLinux ay ku gafaan isticmaalayaasha Windows. Yaanan ka gaabin.
Laga bilaabo xilligan xaadirka ah waxaan tallaabo ka qaadi doonaa dhammaan kuwa adeegsada ee xumeeya kuwa kale. Qofna xaq uma leh. Haddii ay dibedda ka yimaadaan oo ay na xumeeyaan, waanu iska indho-tiraynaa, waannu saxnaa faallooyinka, waannu ka beddelaynaa waana intaas.
agghh waan ka xumahay hadaan silsiladda ka booday, laakiin waxa aad dhahdo, dhawaanahan waxaan akhriyay: «Maaddaama dadka isticmaala Linux ay ka xumaadaan dadka isticmaala Windows» ¬¬ ... ka dibna waxyaalahan oo kale way dhacaan .... Ubaxa ayaan u tuuri kari waayey si sax ah ¬¬
Kalsoonida aan qabo waa xaalad qof aan aqoon sida loo dhaqmo oo u maleeya inuu wax ka ogyahay, dareemona awoodiisa inuu ka hadlo, inkasta oo uusan si dhab ah u aqoon waxa uu ka hadlayo. Xaqiiqdii, waxaan u arkaa inaan jidkeyga waxbadan ka xakameynayo si aanan ugu dhicin dagaallo aan loo baahnayn.
Waa inaad qirataa in faallooyinka noocaas ah, sida kii ugu horreeyay ee uu sameeyay, xitaa aysan ahayn inay dhacaan ... mana ahan inuu ka hadlayo daaqadaha laakiin maxaa yeelay waa faallooyin troll, nadiif ah, oo aan wax tabarucaad ah lahayn oo kaliya waxay kicisaa ololka, way i dhibaysaa uun inay dadku u qaataan xorriyadda ka hadalka wax (wax kasta) iyagoon runtii waxba ogayn ... Aniga? Si toos ah uma isticmaalin daaqadaha ugu yaraan 4 sano, ma dhihi karo maanta sida ay iigu dhibsan tahay aniga maxaa yeelay ma isticmaalo, cidna iima aragto anigoo ka hadlaya bulshada kale ama maqaallada iyo markaan dhaho waan sameeyaa ha u isticmaalin, waxaan sharxayaa inaanan u isticmaalin maxaa yeelay aniga ahaan, my distro, wuxuu i siiyaa wax kasta oo aan u baahanahay ...
Sikastaba ha noqotee, mar dambe kama hadal dacwada, waa ku filan tahay, labadiinaba iyo aniga waxaan leenahay awood aan ku joojino dhibaatadan 🙂
Dadow, waan ka xumahay inaad ku wasakheysid boostada doodan oo aadan ku haysan wax wanaagsan inaad halkaan ku sameyso, @elav @nano haddii qof idinka mid ah uu doonayo inuu tirtiro dhammaan qaamuusyada, oo ay ku jiraan ra'yigeyga, ma diidani, qoraalku wuxuu noqon lahaa mid hadal badan: D, mahadsanid dhammaan: v
Dhamaan wanaagsan hore, qof ayaa raba inuu tijaabiyo dulqaadkeena
ku xoqida wakiilka isticmaalaha xDDDD
hahaha, dameer xD
Oh, kaalay Waa inaanan sidaa u xumayn
Muchach @ s «Ha quudin 'troll'
Btw, tete waan ogaa inaad dib ugu laaban laheyd Arch. XD
hahaha aan aragnee intee ayey igu egtahay xD
Qoraal wanaagsan 🙂
aad u faa'iido badan
Laakiin inta yar ee aan ka akhriyey @ patricio72 waa wax aan micno lahayn: aan is tusno, wax fikrad ah oo fikrad ah oo aad ka haysaa ma jirto waxay leedahay.
Maxay dhibaato badan ugu tahay abuuritaanka muraayad maxalli ah haddii aan u adeegsan doonno softiweerka kaliya mashiinkeenna (ama laba ama saddex, arrintaa)?
Aniga oo hubinaya marwalba haddii kor loo cusbooneysiiyo softiweerka isla markaana ka tarjumaya isbeddelada ku jira makepkg, waxay ila tahay aniga ...
Asal ahaan waxyaabahan soo socda awgood, markaan idhaahdo waxaan isticmaalaa waxbadan oo AUR software ah, kaftan maleh, waqtigan xaadirka ah waxaan haystaa kudhowaad 30 baakado laga soo rakibay AUR, horeyba halkaas ayey uga noqotay wax yar oo fowdo ah si loola macaamilo PKGBUILD kasta, qaabkan Waxaan u maareeyaa in dhammaantood la dhex dhigo si aan awood ugu yeesho inaan u helo iyaga oo abaabulan oo saxan PKGBUILDs gacanta haddii ay sidaas tahay, waa arrin raaxo leh
Weli ma heli karo jidka:
Waxaan hayaa xirmooyinkaan: http://chakra-project.org/ccr/packages.php?SeB=m&L=2&K=msx (Anigu shakhsiyan waxaan haystaa ilaa 60 ka mid ah la rakibay) nuqulada maxalliga ahna waxaa lagu habeeyay liisaska u gaarka ah.
Markaan in yar helo ayaan isku dayi doonaa, taasi aniga faa iido ayey ii tahay 😀
Kuwaas adigaa ilaaliya, oo markaad rakibtid xirmooyinka AUR ee aadan ilaalinaynin Halkaas ayay igu noqonaysaa aniga dhib, maxaa yeelay sida boostadu leedahay marar badan ayay ilaaliyayaashu uga tagayaan PKGBUILD-yahoodii hore oo midna waa inuu soo farageliyaa ... nooc la cusbooneysiiyay maxaa yeelay Adiga Waxay tirtiraan xirmada maxaa yeelay horayba waxay ugu jirtaa AUR / CCR .. aniga ayey igu dhacday markii aan soo rogay nooca la cusboonaysiiyay ee simon, sidii ay horayba u ahayd .. Waa inaan la xiriiraa dayactirka oo aan u sheegaa inuu baytariyada iyo cusboonaysiinta .. taas oo u muuqata in lagu afduubay nooc ka mid ah joogitaanka dibadda ee xD hahaha
Marka codsi aan doonayo inaan rakibo uu leeyahay qoraalkiisa rakibaadda oo waqtigiisu dhacayo oo qofka masuulka ka ah uu qaato waqti uu kaga jawaabo su'aasha hoose, waan cusboonaysiiyaa oo waxaan ku rakibaa maxalliga. Ka dib laba toddobaad ka dib ogeysiiskii ugu horreeyay ee xirmada gabowday, haddii aan weli jawaab ka helin, waxaan weydiisanayaa TU inay la wareegto qoraalka ka imanaya hayaha hadda si ay u qaataan oo ay u soo geliyaan nooca la cusboonaysiiyay
Waxay kuxirantahay uploaderka / dayactirka hada mararka qaar waxay kaa codsanayaan inaad inyar sugto, hadii ay tahay qof aan lagaraneyn ama heysta hal xirmo oo qofka weydiya diidmada laga yaqaano bulshada dhexdeeda markaa isla markiiba way sameeyaan.
Shakhsiyan, marwalba waxaan kula talinayaa dayactirayaasha asalka ah haddii ay rabaan inay mar labaad la wareegaan xirmada, dhib kuma qabin inaan la soo noqdo.
Intaas marka la dhaho, wali macno kama samayn karo isticmaalka repo maxaliga ah ee baakadaha AUR: P: P: P.
Waxay noqon doontaa arrin la rakibo oo la arko haddii lakab maamul oo dheeri ah fududeeyo halkii laga murugsan lahaa 😉
Sikastaba waad ku mahadsantahay dhajinta mawduuca!
sax! adoo ka jawaabaya faallooyinkaagii ugu dambeeyay, halkaas waxaad ku garaacday cidiyaha madaxa, kaliya inaanan waxaas oo dhan sameyn, tani waa xalka ugu badan ... Waxaa laga yaabaa inaad si fudud u xafidato repo-kaaga kaas oo aad wax ka beddesho / geliso / ka saarto wixii aad rabto xD / sidoo kale waxay ii sahlaysaa inaan dib u rakibo iyaga sababaha X, maadaama aan horeyba u haystay xD binaries oo diyaar ah
Waxaad u muuqataa inaad tahay Baraska
Ku jawaab diegogabriel
? Maan fahmin, waxaan ahay Tete xD hahaha
Hagaag, waxaan u arkaa inay faa iido u leedahay abuurida bakhaar maxalli ah haddii ay kugu dhacdo adiga oo kale sida Tete…. Waxay ila tahay inuu sifiican ugu sharaxay boostada uu qoray.
Kiiskeyga looma baahna sidoo kale waxaan u la'nahay aqoon aan ku soo ururiyo xirmo iyo waxyaabo ... weli ma aanan gaarin taas.
Waad ku mahadsantahay boostada, si fiican ayaa loo sharaxay.
Aad ayuu ufiican yahay, 3 bilood iyo dhibaato malahan, waa dhif iyo naadir in wax ku fashilmaan archlinux 😀
Uff, taxaddar in Pedro Debian Flintstones iyo Pablo Slackware Marmol ay madaxiisa galaan.
(In kastoo si daacad ah loo sheego waligood ma aqoonsan doonaan in distro aysan kaliya la mid noqon karin ama ka xasilloonayn tooda laakiin ay sidoo kale lahaan karto xirmooyin casri ah oo ixtiraama kor-u-qaadka halkii ay ka ahaan lahayd isku-darka balastiga
Pablo cardozo dijo
Su'aal aad u nacas ah: ka dib markii aan dhammeystiray hawshii oo dhan oo aan ku daray xirmo aan doonayay inaan rakibo (qaansooyin), amar noocee ah ayaan ku siiyaa si aan u rakibo? Haddii aan yaourt -S qaansooyin ka sameeyo wixii aan u arko inay dib u soo dejinayaan wax walba sidii iyagoo aan ku jirin bakhaarkayga maxalliga ah, iyo haddii aan sameeyo sudo pacman -S brackets waxay ii sheegaysaa in xirmada aysan jirin, taas oo iska cad.
Wax aan seegay? Aad baad u mahadsan tahay oo aad iyo aad u wanaagsan post.
Jawaab Pablo Cardozo
Saaxiibki subaxa ka dib dhiiggu wuxuu u qulqulay maskaxdayda waxaanan gartay inaan ku rakibo pacman -U xulashada iyo dariiqa feylka aan soo dejiyey.
Sikastaba waad mahadsantahay.
Haddii aad sameyso dhammaan hagaha, markaad sameyso pacman -Sy waxaad heli doontaa buugaaga cusub oo ay ku jiraan xirmooyinka deegaanka
haddii loo maleeyo in repo-gaaga loo yaqaan 'Pablo', wuxuu noqon lahaa sidan:
tan ayaa ku dari doonta repo, ka dibna
sudo pacman -Qaabab sy
Tani waxay dib u cusbooneysiin doontaa kaydinta oo ay ku jiraan midka maxalliga ah, waxayna ka heli doontaa oo ka rakibi doontaa barnaamijka repo maxalliga ah
Ahhhhh, laakiin waan sameeyay:
sudo pacman -S qaansooyinka
Taasina aniga iima aysan shaqeeyn, laakiin waxaan heli doonaa barnaamijyo kale oo aan rakibo oo aan arko haddii ay aniga ila shaqeynayaan sida aad u xustay.
Haddii aad weli dhibaatooyin qabto, waad booqan kartaa golaha, IRC, ama ila soo xiriir G + 😀
Ku guuldareystay cusbooneysiinta / rakibida xirmooyinka - arimaha cirka - Meelaha lacag la'aanta ah